Izinhlobo, izimpawu kanye necebo lokwelashwa i-pancreatitis > Izinkinga zesifo sikashukela
Izimpawu ze-pancreatitis kanye nokwelashwa
I-pancreatitis - leli igama leqembu lonke lezifo nezimpawu lapho inqubo yokuvuvukala kwamanyikwe yenzeka khona. Uma inqubo enjalo ibonakaliswa, ke Ama-enzymekukhiqizwa ama-pancreas awangeni kwi-duodenum. Ngakho-ke, baqala ukusebenza ngenkuthalo kakade kumanyikwe, bese bekubhubhisa kancane kancane. Ngakho-ke, inqubo ebizwa ngokuthi yokuzicwilisa iyenzeka. I-pathology enjalo igcwele ukulimala okulandelayo kwezinye izitho, ngoba ngokubhujiswa kancane kwamanyikwe, kukhona isabelo ubuthi futhi Ama-enzyme. Futhi, zingaba segazini futhi zilimaze ezinye izitho zomzimba. Ngakho-ke, i-pancreatitis eyingozi kumele ilashwe ngokushesha ngemuva kokuxilongwa. Kulesi simo, ukwelashwa kwenziwa ikakhulukazi esibhedlela.
Kwabesifazane, i-pancreatitis itholakala kaningi ukwedlula emadodeni. Futhi, abantu abakhuluphele nabadala basengozini yokuthola i-pancreatitis.
Ngabe i-pancreatitis ikhula kanjani?
Emigudwini yamanyikwe, kancane kancane ingcindezi, nama-enzyme angena ezicutshini zesikhumba ashukumisa inqubo yokubhujiswa kwawo. Uma i-pancreatitis ingena kwifomu elinzima ngokwedlulele (kulokhu sikhuluma ngakho i-pancreatic necrosis), khona-ke inqubo ye-pathological ibonakala yi-necrosis yengxenye ebalulekile yezicubu ze-pancreatic. Uma ukuthuthukiswa kwenqubo enjalo kungakhiqizi ukwelashwa okwanele, ke necrosis ngokuhamba kwesikhathi futhi kungathinta izicubu ezinamafutha ezungeze ama-pancreas, zithinte ezinye izitho ezitholakala esikhaleni se-retroperitoneal space. Lapho ama-enzyme e-pancreatic esebenzayo engena emgodini wesisu, isiguli sihlakulela i-pancreatogenic aseptic i-peritonitis. Kulesi simo, ukungabikho kokwelashwa kuholela ekufeni.
I-pancreatitis imvamisa ihlukaniswa izinhlobo eziningi. Ngokuya ngohlobo lwezifo zesifo, i-pancreatitis ingahle ibe bukhali, okwenzeka njalo, ezingamahlalakhonangangokunokwenzeka ukwandai-pancreatitis engapheli.
Ngakolunye uhlangothi, i-pancreatitis eyingozi ingakhula ngezindlela eziningi. At i-pstreatitis pstreatali-acute pancreatic edema iyenzeka, nge i-hemorrhagic pancreatitis hemorrhage kwenzeka izicubu ze-gland, nge i-acanc pancreatic necrosis indlala iba mnyama, bese kubukeka okubunjiweyo kuyo. Uma isiguli sine-pancreatitis ehlanganiswe ne-acute cholecystitis, khona-ke kulokhu sikhuluma nge-acute cholecystopancreatitis. I-purulent pancreatitis Kuyatholakala uma kukhona ama-fasis we-purulent fusion gland. Zonke lezi zinhlobo ze-pancreatitis zingadlula kancane kancane zisuka kwesinye ziye kwesinye.
Ati-pancreatitis eyingozi isiguli sinezinguquko eziqhubeka kancane kancane zokuvuvukala kwezicubu ze-gland, futhi kuthi futhi i-foci ye-necrosis ivele. Kancane kancane, lesi simo sithatha isikhundla i-fibrosis, ukululeka noma ukucabangaizindlala. Kodwa-ke, kwezinye izimo, i-pancreatitis ebukhali ibonakalisa kuphela njengenqubo yokuvuvukala ene-edema yesigaba esithile samanyikwe. Kwezinye izimo, kukhona i-necrosis, supplement kanye nokuvela kokuphuma kaningi emathanjeni futhi amathumba. Ngokuthuthuka kwe-pancreatitis ebaluleke kakhulu, isimo sesiguli sibi kakhulu futhi singabulala, noma ngabe ukwelashwa kwanele.
I-pancreatitis engapheli - Lokhu kuyindlela yesifo lapho ukuvuvukala kuqhubeka kancane, kanti imisebenzi yamanyikwe kancane iyaphazamiseka. Ngenxa yalokho, i-fibrosis yezicubu ze-pancreatic kungenzeka noma ukubalwa kwayo. Kwi-pancreatitis engapheli, izikhathi zokukhishwa kanye nokwanda kungenye kungenye. Umphumela wenqubo engapheli yokuvuvukala kwezicubu ze-pancreatic ingahle ibe umsebenzi ongenamandla wokugaya ukudla. Iziguli ezinjalo zivame ukukhula kamuva isifo sikashukela mellitus. Kwi-pancreatitis engapheli, inqubo yokuvuvukala ingakhula kungaba esiswini sisonke, noma ezingxenyeni zayo ngazinye.
Kwi-pancreatitis engapheli, futhi kuyisiko ukwahlukanisa phakathi kwezinhlobo ezahlukahlukene zesifo. Uma isiguli sibhekwaifomu le-asymptomatic ukugula, khona-ke kuleli cala impilo yakhe ihlala ijwayelekile isikhathi eside. At ifomu lobuhlungui-pancreatitis engapheli ebuhlungwini besisu elingaphezulu ibonakaliswa njalo, ikhula kakhulu ngesikhathi sokuqhuma. At isifo se-pancreatitis esingamahlalakhonaUbuhlungu buvela kuphela ngokubuyiselwa kwesifo. Okujwayelekile "Pseudotumor" ifomu isifo, ngentuthuko yaso lapho kukhona ukwanda kwekhanda lendlala, izicubu zefayibha ziyakhula, nosayizi wendlala uyanda.
Amile futhi i-pancreatitis esebenzayolapho i-pancreatitis ebabayo ihlanganiswa nokwanda kwezifo ze-duodenum, isisu, i-gallder, isibindi.
Ukusebenza okujwayelekile kwamanyikwe abantu kwesinye isikhathi kuyaphazanyiswa ukusetshenziswa kokudla okunezipayisi kakhulu, okuthosiwe, okunamafutha. Ukudlisa ubuthi obudakayo, obungamahlalakhona noma obukhulu futhi bunomthelela ekuthuthukiseni i-pancreatitis. Ukugqugquzelwa kokukhishwa okubukhali kwejusi le-pancreatic nakho kungaba ukuvusa imvelo kwe-neuropsychic.
Ngenxa yalokho, labo abahlukumeza njalo utshwala basengozini enkulu yokuba ne-pancreatitis. I-pancreatitis ivela kakhulu kubantu besifazane abakhulelwe nakomama abasebancane esikhathini sokubeletha. Isihluthulelo sokuvimbela ukukhula kwe-pancreatitis yindlela efanele ekwakhekeni kokudla. Ngakho-ke, lesi sifo sivame ukutholakala kulabo abahlala bekudla ukudla okungenamsoco: ukudla okusheshayo, ukudla okuyisidina, ukudla okuphezulu odakeni nokunye ukungcola kwamakhemikhali.
Ukuthuthukiswa kwesiguli esine-pancreatitis engapheli kuvame ukwenzeka ngemuva kwesimo esibi sesifo. Kodwa-ke, kaningi, i-pancreatitis engapheli iba futhi njengomphumela wezinye izifo: cholecystitis, isilonda se-peptic, isifo samathumbu, isibindi nabanye
Imbangela evamile kakhulu ye-pancreatitis cholelithiasis. Ngaphezu kwalokho, i-pancreatitis ingazibonakalisa iphikisana nesizinda sobuthi obunzima, ukulimala, izifo ezibangelwa amagciwane, ukuhlinzwa kanye nokukhohlisa kwe-endoscopic. Kwesinye isikhathi i-pancreatitis engalapheki iba mbi ngenxa yemithamo emikhulu kakhulu amavithamini AfuthiE.
Esimweni esibi nesingapheli sesi sifo, izimpawu ze-pancreatitis ziziveza ngezindlela ezihlukile. Ngaphezu kwalokho, ngemuva kokuba umuntu ehlaselwe yi-pancreatitis enkulu, angakha ama-pseudocysts ama-pancreas ahlobene ne-pancreatitis engapheli. Ngakolunye uhlangothi, ngendlela engapheli yesifo, i-pancreatitis eyingozi nayo ingakhula.
Uma isiguli sihlakulela i-pancreatitis ebukhali, khona-ke izimpawu zayo zincike ngqo ekutheni hlobo luni nalesigaba salesi sifo esenzeka, kanye nakwezinye izici zomuntu ngamunye. Isibonakaliso esishiwo kakhulu futhi esihlala sikhona se-pancreatitis esibuhlungu ubuhlungu besisu obukhulu. Ubuhlungu buhlala bukhona, buthuntu noma busiki. Uma lesi sifo siqhubeka, izinhlungu ziqina futhi kwesinye isikhathi zibangele ukushaqeka. Indawo yendawo yendawo yobuhlungu iyi-hypochondrium yangakwesokudla noma kwesobunxele, ngaphansi kwesipuni. Uma wonke ama-pancreas ethintekile, khona-ke izinhlungu ziyi-herpes zoster. Ngaphezu kwalokho, zimpawu ze-pancreatitis eyingozi hiccupsumlomo owomile, i-belching, isicanucanu. Umuntu unesifo sokuhlanza njalo, lapho kutholakala khona inhlanganisela ye-bile. Kodwa-ke, ngemuva kokuhlanza, isiguli asizwa mpumuzo. Isihlalo somuntu ophethwe yi-pancreatitis ebukhali yi-mushy, kuyo ungathola izingxenye zokudla okungaphanjwanga. Isihlalo asimnandi, uFrothy.
Uma lesi sifo siqhubeka, isimo somzimba wesiguli siwohloka ngokushesha okukhulu. I-pulse iyashesha, izinga lokushisa lomzimba liyenyuka, izinkomba ziyehlaumfutho wegazi. Umuntu uhlala ekhathazekile ukuphefumula, olimini kukhona ipulishi eliningi, izithukuthuku ezinamathelayo zihlala zibonakala emzimbeni. Izici zobuso zesiguli zibukeka zikhomba, isikhumba sivele sishintshe futhi kancane kancane sibe mpunga. Ngesikhathi sokuhlolwa, udokotela uthola okuqinile ukuqhakaza, amathumbu nesisu asenzi. Ngenqubo ye-palpation yesisu esibuhlungu, ukungezwani kwemisipha akunqunywa isikhathi eside. Izimpawu zokucasuka kwe-peritoneal kamuva ziyavela.
Ezigulini ezine-pancreatitis eyingozi, ngokuhamba kwesikhathi, izinkinga eziningi ezinzima zingakhula zombili izitho zomgogodla wesisu nokuphuma ezithweni ezingaphandle kwe-peritoneum. Izinkinga ezivame kakhulu amathumba nezikhwama zokugaya phlegmon, i-peritonitis, izilonda zesisu nokuguguleka, i-pulmonary edema namathumba, ukuvela kokugcotshwa, inyumoniya. Kaningi, i-pancreatitis eyingozi ivusa intuthuko ihepatitis, futhi ngenxa yalesi sifo, okuqukethwe ushukela wegazi kuyakhuphuka, ngaphezu kwalokho, ushukela uyatholakala nomchamo wesiguli.
Izimpawu ze-pancreatitis engapheli zivezwa kobuhlungu esiswini ngesikhathi sokuqhuma, izinhlungu ku-hypochondrium yangakwesobunxele, ifinyelela ku-scapula noma esifubeni. Kwezinye izimo, ukubonakaliswa kobuhlungu be-herpes zoster kungenzeka, okuhlukahluka kusuka kokukhanya kuya kubukhali kakhulu. Imizwa enjalo ifana nobuhlungu ku-pancreatitis esibuhlungu. Ngemuva kokudla ukudla okunamafutha, isiguli singaba nokuhlanza okukhulu. Ngaphezu kwalokho, ukunciphisa isisindo esinzima, umlomo owomile, isifo sohudo, kanye nesicanucanu kuvame ukuba yizimpawu zokuqina kwesibeletho. Ngisho nangesikhathi lapho ukwanda kwalesi sifo kungabhekwa, umuntu angazizwa egula, uyahlupheka ukuqunjelwaizinhlungu ezithambile. Uma uhudo lubonwa phakathi nalesi sikhathi, khona-ke lokhu kukhombisa ukuthi amandla we-pancreas wokugaya akhubazeke kakhulu.
Ukuxilonga lesi sifo, njengomthetho, akunzima, ngoba izimpawu zaso cishe zivezwa njalo. Kodwa noma kunjalo, udokotela kufanele anqume uhlobo lwalesi sifo ukunquma ukwelashwa okwanele. Ukuze wenze lokhu, kungakuhle ukuqhuba i-laparoscopy - indlela ekuvumela ukuthi uhlole i-patity esiswini ngaphakathi nangamathuluzi akhethekile.
Uma kusolwa ukuthi i-pancreatitis eyingozi kakhulu, kwenziwa ezinye izivivinyo zelebhu. Lokhu kuhlolwa kwegazi okujwayelekile, i-urinalysis, izifundo ze-biochemical. Kwenziwa ukuhlolwa okufanayo nge-pancreatitis engapheli. Kodwa-ke, kubalulekile ukwenza izifundo ze-biochemical ngesikhathi sokukhula kwesifo. Kwenziwa nesifundo esikhethekile sokudakwamanzi.
Kubalulekile ukuthi ukwelashwa kwe-pancreatitis eyingozi kwenziwe ngempela esibhedlela ngaphansi kokuhlolwa kukachwepheshe. Ngakho-ke, uma kusolwa ukuthi i-pancreatitis eyingozi kakhulu, isiguli kufanele silaliswe esibhedlela ngokushesha. Kepha ngaphambi kokuba lowo muntu ayiswe esibhedlela, ekhaya kufanele kwenziwe konke ukugwema ukushaqeka kobuhlungu. Kubalulekile ukuthi ungadli ukudla, futhi odokotela abezimo eziphuthumayo kwezinye izikhathi, ngophenyo, bakhipha ukudla obekuthathwe phambilini. Ukubanda kufakwa esiswini esingaphezulu ukuze kwehliswe ukwenziwa kwama-enzymes wokugaya yi-pancreas. Ukudambisa i-spasm, kunconywa ukulahla amaconsi angama-1-2 ngaphansi kolimi I-Nitroglycerin noma faka umuthi we-intramuscular reliems spasms, ngokwesibonelo, akukho-shpu. Odokotela be-ambulensi kufanele baphathe i-anesthetic.
Esibhedlela, kusetshenziswa izindlela zokwelapha ezibambela ukwelapha i-pancreatitis e-acute. Ikakhulu, izisombululo ezahlukahlukene zethulwa egazini - izixazululo zesaline, amalungiselelo amaprotheni, ushukelangosizo lokunqotshwa ukudakwa nobuhlungu. Ibhalansi ye-acid-base nayo ijwayelekile.
Ukudambisa izinhlungu nokunciphisa imisipha, kuyasetshenziswa ama-antispasmodics. Futhi ukugcina ukusebenza kwenhliziyo okujwayelekile, kusetshenziswa izidakamizwa zenhliziyo. Ngaphezu kwalokho, ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kubandakanya ukufaka Amavithamini we-B, Vitamin CIzidakamizwa ze-diuretic ezivimbela i-pancreatic edema futhi zikhuthaze ukumbiwa kwemikhiqizo yokubola. Ukwelashwa okuphoqelekile kufaka phakathi izidakamizwa ezicindezela ukukhiqizwa kwama-enzymes e-pancreatic acid.
Ukusetshenziswa kwamanzi amaminerali ngaphandle kwegesi kunconyiwe, kepha iziguli ezinepancreatitis eshubile zingathatha ukudla kuphela ezinsukwini ezingama-4-5 ngemuva kokuqala kwesifo. Ekuqaleni, kunconywa ukuthatha i-yogurt (100 g yomkhiqizo njalo ngehora), futhi ngakusasa, amagremu angama-200 e-cottage shizi ayengezwa kulokhu kudla. Ezinsukwini ezilandelayo zokwelashwa, isiguli kufanele silandele ngokukhethekile ukudla, ngoba umsoco ofanele we-pancreatitis uyinto ebaluleke kakhulu ebamba iqhaza ekwelapheni.
Uma ukwelashwa okulondoloziwe kungasebenzi, khona-ke ukungenelela kokuhlinzwa kuyadingeka. Njengomthetho, ukuhlinzwa kwenziwa ngezinsuku eziyi-10-14 ngemuva kokuqala kepancreatitis. Izinkomba zokuhlinzwa ngokushesha ziyizinkinga ezithile. Ukungenelela kokuhlinzwa kufaka ukususwa kwengxenye yama-pancreas eye yenzeka i-necrosis, kanye nokuvuselelwa komgogodla wesisu.
Uma kunokukhanyiswa kwe-pancreatitis engapheli, khona-ke ukwelashwa kwenziwa ngokuya ngohlelo olufanayo nokwelashwa kwe-pancreatitis eyingozi. Iziguli ezine-pancreatitis engapheli kufanele zihambisane nokudla, futhi zidle nezidakamizwa ezihlawulela ukungabinayo imfihlo nezidakamizwa ezi-alkalizing (ngokwesibonelo, i-almagel) Ngokubonakaliswa kobuhlungu, ama-ejenti wokunciphisa i-spasm ayakhonjiswa - papaverine, atropine, akukho-shpaizidakamizwa ezinomphumela wokubulala izinzwa. Iziguli ezine-pancreatitis engapheli kufanele zivame ukuvakashela ama-sanatorium akhethekile futhi zilashwe lapho.
Kunemithi eminingi yabantu efakazelwe ukusiza ukubhekana nalesi sifo. Kathathu ngosuku ngaphambi kokudla, iziguli ezine-pancreatitis engapheli zinconywa ukuba zithathe isigamu sengilazi ye-oatmeal jelly. Ukuyipheka, udinga ukuthulula ingilazi eyodwa yama-oats ahlanjiwe ngaphambili kwilitha elilodwa lamanzi bese ushiya amahora ayi-12. Ngemuva kwalokho, ujeli luphekwe imizuzu engama-30 bese ufakwa amanye amahora ayi-12. Ngaphambi kokuwusebenzisa, kufanele ihlanjululwe ngamanzi ngevolumu yayo yasekuqaleni futhi ihlungwe.
Kuyasiza ekuseni ukuthatha ingxube yejusi elisanda kufakwa lamazambane kanye nezaqathe: esiswini esingenalutho udinga ukuphuza i-200 g yomxube onjalo. Inkambo yokwelashwa ihlala isonto lonke, bese ilandelwa yisikhathi sekhefu elithatha isonto lonke.
Izimpawu ze-pancreatitis kanye nokwelashwa kwalesi sifo kuncike ebangeni lomonakalo wamanyikwe kanye nokuthuthukiswa kwezinqubo ezonakalisayo. Ukubonakaliswa kwe-pancreatitis nezimpawu zesifo kuvezwa ngumphumela we-pathological we-pancreatic enzymes, osebenza ngaphambi kwesikhathi emgunjini we-pancreatic we-gland, futhi unomthelela ongemuhle ezicutshini zawo, usibhubhise. Ama-enzymes abiza ukugaya ukudla "ukugaya" ama-pancreas uqobo.
Sinikeza inketho yokuhlukanisa i-pancreatitis:
1. i-pancreatitis eyingozi
2. i-pancreatitis engapheli
- I-pancreatitis engamahlalakhona
Isisekelo se-pancreatitis engapheli ukuthuthukiswa kwenqubo yokuvuvukala-i-sclerotic, okuholela ekunciphiseni okuqhubekayo kwemisebenzi yokukhuphuka kwangaphandle nangaphakathi. Kukhona ukuhlangana kwe-pancreatic parenchyma (lokungeniswa) ngenxa yokwanda kwezicubu ezithintekayo, ukubukeka kwezibazi ze-fibrous, i-pseudocysts nokubalwa.
1. Kwi-pancreatitis eyisisekelo engapheli, inqubo yokuvuvukala yenziwa kuphela kumanyikwe.
2.I-pancreatitis yesibili engalapheki iba ne-cholelithiasis, ulcer peptic, duodenal diverticula.
3. E-etiology ye-pancreatitis eyi-basic pancreatitis, ukulimala, i-allergies, ukunciphisa i-Wirsung duct, ukuluthwa utshwala okungalapheki, ukuphazamiseka kokujikeleza kwegazi, kanye nokuhlaselwa kwe-pancreatitis eyingozi kudlala indima.
Ukuhlukaniswa kwe-pancreatitis engapheli.
1. I-cholecystopancreatitis engapheli.
2. I-pancreatitis engapheli ejwayelekile.
3. I-pancreatitis ye-indative.
4. I-pseudotumor pancreatitis.
5. Kubalwa i-pancreatitis.
6. I-pseudocystic pancreatitis.
1. Ama-cysts e-pancreatic.
2. I-Stenosis ye-Wirsung duct.
3. I-Thrombosis ye-splenic vein.
4. Umfutho wegazi ophakeme.
5. Isifo sikashukela mellitus.
Ukwelashwa kwe-pancreatitis engapheli kubandakanya: ukudla, ama-painkillers, amavithamini, ukwelashwa esikhundleni se-enzyme, ukwelashwa kwesifo sikashukela kanye nezinye izifo ze-endocrine, ukwelashwa okufika ngesikhathi kwesifo se-gallstone.
Ukuchazwa kafushane ngalesi sifo
I-pancreatitis yisifo esibonakaliswa ukuvuvukala kwamanyikwe. Imvamisa, amanyikwe enza imisebenzi emibili ebalulekile. Okokuqala, ama-pancreas akhiqiza ama-enzyme okuthi, angene emathunjini amancane, ayasebenza futhi abandakanyeka ekugayweni kwamaprotheni, amafutha kanye nama-carbohydrate. Okwesibili, lo mzimba ukhiqiza i-hormone insulin, elawula izinga likashukela egazini.
Uma, ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, ama-enzyme e-pancreatic eqala ukusebenza ngisho nangaphakathi kwesitho, i-gland ngokwayo igaywe bese kuvela inqubo yokuvuvukala.
Kunezinhlobo ezimbili ze-pancreatitis: i-pancreatitis eqeda futhi engalapheki.
Ngokuvamile kutholakala kwabesifazane abakhuluphele abaneminyaka yobudala engama-30 kuye kwengama-60. Ukuqala kwalesi sifo kubonakaliswa yibuhlungu obukhulu bebhande esiswini, kuvame kakhulu ngemuva kokuphuza utshwala noma ukudla okunamafutha. Ubuhlungu bungaba buthakathaka, bubekezeleleke, noma bube bukhulu kakhulu ngemisebe buye kuyi-scapula noma e-sternum. Ubuhlungu bungaba bukhulu kangangokuba kwezinye izimo isiguli singaba nokuqhaqhazela noma ukuwa. Isicanucanu, ukuhlanza kanye nesitulo kuyabonakala. Ngenxa yokuphuma okuvinjelwe kwe-bile, isikhumba ne-sclera ziba phuzi ngombala. I-Cyanosis yesikhumba sesisu kanye nodonga lwesisu sangaphandle kwesinye isikhathi kungenzeka. Izimpawu zokudakwa ziyaqapheleka, ulimi oluku-pancreatitis olomile loma futhi luboshwe nge-plaque.
Ekuqaleni kwalesi sifo, ukuqhakaza kuyabonakala, kanti udonga lwesisu luhlala luthambile. Ngokukhula kanye nokuqhubekela phambili kwe-pancreatitis eyingozi, ukungezwani kwemisipha nezimpawu zokucasuka kwe-peritoneal kuyaqapheleka.
I-pancreatitis eyingozi ingaqeda ukululama noma ingene ifomu elingamahlalakhona. Izimo ezinzima kakhulu ze-pancreatitis esibuhlungu zingabulala.
I-pancreatitis - ukuvuvukala kwezifo zamanyikwe. Imbangela eyinhloko ye-pancreatitis ukwephula ukuphuma kwejusi yokugaya kanye namanye ama-enzyme akhiqizwa yi-pancreas emathunjini amancane (duodenum). Ama-enzyme anjalo awabhubhisi nje kuphela zonke izicubu ze-gland uqobo, kepha nemithambo yegazi nezinye izitho eziseduze nayo. Umphumela walesi sifo ungabulala ngisho. Ukwephulwa kokuphuma kwe-bile, kuvame ukufaka isandla ematsheni nasezinswinini ezivimbela ukuphuma kwe-pancreas. Izisulu ze-pancreatitis ikakhulukazi zingabantu abathanda ukudla ngokweqile, ukusebenzisa kabi uphuzo oludakayo, kanye nabathandi bamafutha, isipayisi, othosiwe kanye nokunye ukudla okungenampilo.
Ukuqonda izinqubo zokukhula kwe-pancreatitis, udinga ukubheka okuncane ezinqubweni ezibalulekile zamanyikwe. Sizobahlaziya kafushane.
Amanyikwe (lat. Pancreas, pancreas) - Isitho esibalulekile esibandakanyekile ekugayweni kokudla, kufaka phakathi ukugaya amaprotheni, amafutha nama-carbohydrate. Amanyikwe atholakala esifundeni esibuyiselwa emuva, esiswini, endaweni yokulala komuntu - ngaphansi kwesisu, ukusuka lapho sathola khona igama. Ama-pancreas akhiqiza izinto ezinjenge-amylase, lipase, proteinase, i-pancreatic polypeptide, kanye ne-insulin, i-glucagon, i-somatostatin, i-ghrelin nabanye. Lapho ukudla kungena emzimbeni, ama-pancreas aqala ukukhiqiza lezi zinto, okuthi, nge-duct exhunywe ngqo nokuqala kwe-duodenum, zingene kule ngxenye yamathumbu amancane. Lezi zinto zinomthelela ekucutshungweni kokudla, ukumunyiswa ngamathumbu ezinto ezizuzisayo ezingena emzimbeni, imetabolism nezinye izinqubo ezibalulekile.
Lapho umuntu, ngenxa yokuphazamiseka okuhlukahlukene (isihlabathi, amatshe, isimila, ukukhula okungajwayelekile, ukuthunyelwa esikhundleni sesikhundla se-gland noma i-gall bladder, ukulimala nezinye izimbangela), i-pancreatic duct, ama-enzyme ayo, futhi kwesinye isikhathi ujusi wesinye inyongo, uvinjelwa lapho engena emzimbeni ukudla kuhlala kuyo, futhi izinqubo zokugaya "zenziwa zasebenza" ku-gland uqobo. Imvamisa, ukusebenza kwensimbi ukukhiqizwa kwenzeka ngaphambi kwesikhathi. Ngakho-ke, izinto zabo siqu “zigaya” izicubu ze-pancreatic.
Ake sibheke isibonelo sendlela ezinye izinto ezikhiqizwa ngayo amanyikwe, lapho zihamba, zithinta ngayo lesi sitho:
I-Lipase (isebenza amafutha) - ngokubambezeleka kumanyikwe, kuholela ekuwohlokeni kwamafutha kwamangqamuzana esitho.
I-Trypsin (amaprotheni amaprotheyini) - iholela ekukhukhumaleni kwamaseli we-pancreatic, ukuvuvukala kwawo nokufa.
Ngaphezu kwalokho, nge-pancreatitis, ubuthi bomzimba buvela, ukwanda ngosayizi wamanyikwe, ukufa kwamaseli we-gland, ngokuhamba kwesikhathi, ukutheleleka kungajoyina inqubo yokuvuvukala, okuvame ukufaka isandla ekuthuthukiseni i-purulent necrosis.
Kufanele futhi kwaziwe ukuthi kunokudla okufaka isandla ekukhiqizeni ijusi le-pancreatic kanye nama-enzymeni e-pancreatic ngobuningi obukhulu kakhulu - utshwala, amanoni, isipayisi, othosiwe, obhemayo kanye nezinye izinhlobo ezifanayo zokudla, yingakho umthamo omkhulu wama-enzyme uqala "ukuhlasela" ama-pancreas i-gland, okubangela ubuhlungu obukhulu nezinye izimpawu ze-pancreatitis.
Izinkinga ze-pancreatitis nazo zibangelwa ukumunwa okuyingxenye kwama-enzymes we-pancreatic ngohlelo lokujikeleza kwegazi, emva kwalokho igazi liwathwala emzimbeni wonke, lithinta inhliziyo, isibindi nezinye izitho, okudala ukuvela kwezimpawu zobuthi zomzimba.
Ekugcineni, ekuthuthukiseni i-pancreatitis, kufanele kuthiwe lesi sifo se-pancreas singabulala. Lokhu kungenxa yokuthi lesi sitho sitholakala eduze kwe-aorta nezinye izitho ezibalulekile. Futhi-ke, inqubo yokuvuvukala, ngaphansi kwezimo ezingezinhle, ingaya ezithweni ezingomakhelwane. Ngaphezu kwalokho, i-pancreatitis ingakha umdlavuza we-pancreatic.
Ngokwezibalo, i-pancreatitis iba kaningi kakhulu kubantu abalandelayo:
40% - abantu abasebenzisa kabi utshwala, kwezinye izindawo - kuze kufike ku-70%,
30% - abantu abanenkinga yesifo se-gallstone (cholelithiasis),
20% abantu abakhuluphele
5% - I-pathology ekwakhiweni kwesistimu yokugaya ukudla, ukubekwa kwayo okungafanele,
4% - ukuthatha ngokungalawulwa imishanguzo ehlukahlukene, ubuthi nezinye izimbangela, okuzoxoxwa ngazo esikhathini esizayo esihlokweni,
1% - izizathu ezingaziwa.
Uma sikhuluma ngezicelo ezijwayelekile, singasho ukuthi ngokusho kwe-Yandex, bangaphezu kuka-500,000 abantu ngenyanga abacela i-pancreatitis, okubonisa ukwanda kwayo okuphezulu.
Ngokusho kwemithombo ehlukahlukene, iphesenti lokushona kwalesi sifo lisuka kwezi-15 laya ku-90% leziguli.
Izimpawu ze-pancreatitis eqeda futhi engalapheki
Ubuhlungu ku-pancreatitis esibuhlungu. Ukudipha noma ukusika, ubuhlungu obukhulu, obuqhubekayo. Ukuqondiswa kobuhlungu - kuyi-hypochondrium yangakwesobunxele noma kwesokudla (kuye ngokuthi indawo yokuvuvukala kwesitho), ngaphansi kwesipuni, noma komlingiswa we-tinea (ngokuvuvukala okugcwele kwendlala). Ubuhlungu bungabuye bunikezwe ku-blade ehlombe, esifubeni nasemhlane. Ukudlondlobala kobuhlungu ku-pancreatitis kwenzeka ngokusetshenziswa kotshwala, isipayisi, okunamafutha, okuthosiwe kanye nokunye ukudla okwandisa imfihlo yokuphuza ujusi we-pancreatic. Uma usizo lokuqala lunganikezwanga, isiguli singaba nokuqunjelwa kobuhlungu, singalahlekelwa ukwazi. Ngokuthuthumela kobuhlungu, ngisho nokufa kwesiguli kungenzeka.
Ubuhlungu be-pancreatitis engapheli. Ubuhlungu be-paroxysmal ku-pancreatitis engamahlalakhona bungahamba nomuntu iminyaka eminingana, futhi amashumi eminyaka, ikakhulukazi, ngokuqinisa, imizuzu eyi-15 kuya kokudla ngemuva kokudla - okubabayo, okuthosiwe, okunamafutha, obhemayo, otshwala, kanye nekhofi noshokoledi. Ngokusebenzisa kanyekanye izitsha ezinjalo, izinhlungu ziba zimbi kakhulu. Isikhathi sobuhlungu singasukela ehoreni eli-1 kuye ezinsukwini ezimbalwa. Ukwenza kwasendaweni, njengasesimweni esibi sesi sifo. Ukuqina kobuhlungu kuyancipha ngokugoba kanye nama-squats.
Shintsha umbala wesikhumba nezinye izingxenye zomzimba. Isikhumba sobuso nge-pancreatitis siyaphenduka siphuzi, bese ekugcineni sithole i-grey-earthy hue. Esifundeni sangemuva eliphansi nange-navel, isikhumba sithola i-tint eluhlaza okwesibhakabhaka, njengokungathi simabhele. Esifundeni se-inguinal, isikhumba siphenduka umbala ohlaza okwesibhakabhaka. Ukushintshwa kwamathoni esikhumba kuchazwa ukuphuma kwegazi okungenampilo ngesikhathi sokuvuvukala kwamanyikwe, lapho igazi lingena ngaphakathi kwesikhumba.
Ukuphuzi kwesikhumba kanye ne-sclera. Lezi zinguquko zingakhombisa ukuba khona kwesimo se-pancreatitis yesifo se-pancreatitis, esivame ukukhula lapho ingxenye eyandisiwe ye-bile duct ejwayelekile igwinyiwe. Kwesinye isikhathi ukugqama kwesikhumba, ngokwesibonelo, ngesimo esingapheli sesi sifo kudlula, noma kunjalo, abamhlophe bamehlo bahlala bengamatende aphuzi.
Phakathi kwezimpawu eziphambili ze-pancreatitis eyingozi nazo zingahlukaniswa:
Isicanucanu, kwesinye isikhathi ngokuhlanza (ukuhlanza kuvame ukuqala ngezinhlayiya zokudla, bese kuqukethe i-bile)
I-Bloating (flatulence), i-belching,
Ukushisa okuphezulu nokuphakama komzimba,
Ukhuphula umjuluko ngesithukuthuku esimnandi,
Umfutho wegazi ophansi noma ophakeme, i-tachycardia,
Umlomo owomile, futhi kuvela isigubhu esiphundu olimini,
I-diarrho noma ukuqunjelwa, imvamisa inezinhlayiya zokudla okungangenisiwe,
Ukuphathwa kwemisipha yesisu, nokuhlala kwazo kushubile,
Ukwehla kwesisindo okungenzeka kusheshe
Yini enye eyenzekayo nge-pancreatitis engapheli?
Kwi-pancreatitis engapheli, ngokungafani nefomu elinamandla, izinguquko ezibhubhisayo kwezicubu zamanyikwe ziqala ukwenzeka. Ngeshwa, ngisho nalapho kumiswa inqubo yokuvuvukala, lezi zinguquko ze-pancreatic zidinga isiguli ukuthi siqhubeke nokulandela indlela yokudla, kanye nezindlela ezahlukahlukene zokuvimbela, ukuvimbela ukubuya kwesigaba esibi se-pancreatitis.
Futhi, ngokushintshwa kwesakhiwo kumanyikwe, eminye imisebenzi yalesi sitho iyaphazamiseka, ngokwesibonelo, ukukhiqizwa kwe-hormone insulin, ebhekele ukucubungulwa kwama-carbohydrate, kuyaphazamiseka. Ngokuntuleka kwayo, izinga likashukela wegazi liyakhuphuka, okuhamba isikhathi kungaholela ekwakhiweni kwesifo sikashukela.
Kubaluleke kakhulu ukuthi isiguli, ngokuhlaselwa ngamandla kwe-pancreatitis, sibonane nodokotela ukuvimba ukuguquguquka kwesimo esibuhlungu salesi sifo sibe esingalapheki.
Kubalulekile! Imvamisa, i-pancreatitis engamahlalakhona i-asymptomatic, noma enezimpawu ezincane.
Izinkinga ze-pancreatitis zingaba:
I-syndrome yobuhlungu obungamahlalakhona, ekhula ngezikhathi ezithile kangangokuba umuntu angalahlekelwa ukwazi,
I-pancreatic necrosis (i-necrosis yezicubu ze-pancreatic),
Ukwakhiwa kwe-cyst yamanga neyeqiniso
Izinkinga zamaphaphu ngendlela yokuhluleka ukuphefumula,
1. I-pancreatitis eyingozi.
2. I-pancreatitis ye-acute ejwayelekile. Kubonakaliswa ukukhuphuka noma ukubonakala kwezimpawu zesifo, kuze kube izinyanga eziyisithupha, kusukela kuzimpawu zaso zokuqala.
3. I-pancreatitis engapheli. Imvamisa, kuyindlalifa ye-pancreatitis eyingozi.
4. Ukhuphula i-pancreatitis engamahlalakhona. Kubonakaliswa ukwanda noma ukubonakala kwezimpawu zesifo, ngemuva kwezinyanga eziyi-6, kusuka kuzimpawu zaso zokugcina.
Ngohlobo lesion of gland:
2. Okonakalisayo (i-pancreatonecrosis)
2.1. i-necrosis encanyana eqondayo ye-pancreatic,
2.2. i-medium ebalulekile ebalulekile ye-pancreatic necrosis,
2.3. i-main pancreatic necrosis,
2.4. i-pancreatic necrosis esezingeni eliphansi (ukulimala ngesikhathi esifanayo kuzo zonke izingxenye ze-gland - ikhanda, umzimba nomsila).
Usizo lokuqala lwe-pancreatitis
Yini okufanele uyenze uma unokuhlaselwa i-pancreatitis?
1. Isiguli sidinga ukulala, amadolo angacindezelwa esifubeni, lokhu kusiza ukunciphisa izinhlungu. Sidinga ukuthula okugcwele nokuzivocavoca umzimba okuncane.
2. Okuthile okubandayo kudinga ukufakwa esifundeni se-epigastric - isichibi sokufudumeza ngamanzi abandayo, ibhodlela. Ukubanda kusiza ukunciphisa izinhlungu, futhi kusiza nokunciphisa ukuvuvukala nokuvuvukala.
3. Ukudambisa ukhula nobuhlungu, ungaphuza le mithi elandelayo: iDrotaverin, iMaxigan, iNo-shpa, iSpazmalgon.
4. Shayela iqembu le-ambulensi.
5. Esikhathini sokwanda kobuhlungu, kuyadingeka ukushiya ngokuphelele ukudla, ngaphezu kokuphuza amanzi asobala - ngaphandle kwezithasiselo negesi, okuzosiza ukunciphisa ukucasulwa kwepancreatic.
Ukuthula, kubanda futhi indlala - Le yimithetho emithathu eyisisekelo yosizo lokuqala ekuhlaselweni i-pancreatitis.
Ukwelashwa okuyinhloko kwe-pancreatitis
Ukwelashwa kwe-pancreatitis kuqala ngokuvakashela udokotela okuphoqelekile, futhi kufaka phakathi:
1. Ukuphumula nokuthula (ngesikhathi sokuhlaselwa),
2.1. Ukukhululeka kobuhlungu
2.2. Ukwelapha kwe-Antenzyme
2.3. Ukuthatha ama-enzyme e-pancreatic,
2.4. Ukushintshwa kweleveli esele esele ye-acid,
2,5. Ukwelashwa nge-Vitamin
2.6. Ukwenza ngcono umsebenzi wegaya yokugaya,
2.7. Ukudla kwabazali
4. Ukwelashwa kokuhlinzwa (uma kunesidingo).
5. Ukwelashwa kweSanatorium.
Ukwelashwa kwe-pancreatitis ebukhali yenziwa esibhedlela.
2.1. Ukudambisa izinhlungu (antispasmodics)
Ukudambisa izinhlungu nge-pancreatitis, udokotela uvame ukunquma:
I-Antispasmodics: IDrotaverin, iDuspatalin, iMaxigan, iNo-shpa, iSpazmalgon, amaSpareks, uFenikaberan.
I-M-Cholinolytics: "Atropine", "Gastocepin", "Metapine", "Chlorosil".
Ngobuhlungu obungapheli, bunqunyelwe I-H2 blockers: "Ranitidine", "Famotidine".
Ukwelashwa kwe-Antenzyme kuhloswe ukumisa izinqubo ezibulala amanyikwe.
Izidakamizwa ze-antisecretory zihlose ukuvimba ama-enzyme afana ne-trypsin, trasilol, gordox, contracal, pantripin nabanye, kanye nokuvinjwa kokuhlanganiswa kwamaprotheni ku-gland, okusiza ukunciphisa izinhlungu, ukuvuvukala, ukuphazamiseka kwamakhompiyutha kanye nezinye izimpawu zokuvuvukala kwepancreatic.
Phakathi kwezidakamizwa ezibulala izinzwa zingahlukaniswa: ama-cytostatics ("Ribonuclease", "Ftorafur", "5-fluorouracil"), "Gordoks", "Kontrikal", "Pantripin". I- "Trazilol", "Epsilo-aminocaproic acid" (E-AKK), "Amidopyrine", kanye ne-proton pump blockers (“Nexium”, “Omez”, “Omeprazole”, “Rabelok”).
Kumele kuqashelwe ukuthi i-proton pump inhibitors (blockers) inikela ekunciphiseni kwezinga le-hydrochloric acid emgodini wokugaya ukudla, nakho okusiza ukudambisa izinhlungu ngesikhathi se-pancreatitis.
Ngendlela edonsayo ye-pancreatitis, i- “Asparkam” ichazwa kanye nezidakamizwa ezibulala amagciwane.
Ukucindezela ukukhiqizwa kwama-hormone ngama-pancreas, ezimeni ezimile angabekwa - "Octreotide".
2.3. Ukuthatha ama-enzyme e-pancreatic
Ukuze wehlise umthwalo kumakhansele akhona, futhi, uma kungatholakali ukungabikhona kobumfihlo bakhe, kunqunywe ama-enzymes e-pancreatic. Le mishanguzo iyinkimbinkimbi yama-enzymes afanayo akhiqizwa ngukugcotshwa ukuze kugaye ukudla futhi igqume ukudla, isiza nasekuqhekeni amaprotheni, amafutha kanye nama-carbohydrate.Ngakho-ke, umsebenzi we-gland lapho ungena emzimbeni wokudla omncane.
Phakathi kwamalungiselelo ngama-enzymes e-pancreatic, umuntu angahlukanisa: "Festal", pancreatin ("Biozim", "Vigeratin", "Gastenorm", "Creon", "Mezim", "Pancreatin", "Penzital", "Hermitage").
Lamaqembu ezidakamizwa athathwa kangcono ngemuva kokudla futhi ahlanzwa ngamanzi amaminerali e-alkaline.
Ukudla okwengeziwe kwama-enzymeni e-pancreatic kubuye kunciphise nezimpawu ezinjengokucanuzelelwa kwenhliziyo, ukuqhakaza, isihlalo sokucasukela ukwehla komzimba, kanye nokunciphisa umzimba ngokushesha.
2.4. Ukushintshwa kweleveli esele kwe-acid-base esele (pH)
Nge-pancreatitis, ohlelweni lokugaya luguqula ibhalansi ye-acid-ku-acidic. Ngakho-ke, ngalesi sifo esidalwa yi-pancreatic, kanye nokusetshenziswa kwama-histamine blockers namaqembu athile ama-antispasmodics (anticholinergics), izidakamizwa zibekelwa ukuthi zinciphise i-acidity esiswini nezinye izitho zokugaya ukudla.
Ukulungiselela okulinganisa i-acid-base esele (pH) emgodini wokugaya ukudla: I-"Almagel", "Gastal", "Maalox", "Famotidine", "Phosphalugel", "Cimetidine".
Ekuphazamisekeni okukhulu kokugaya ukudla kanye nokutholwa kabi kokudla ngamathumbu, kunikezwa ukondliwa kwabazali.
Njengokudla kwabazali, ngokudonsa ngokuxhunywa ngaphakathi, okulandelayo kuvame ukuphathwa:
Izingxube zama-amino acid abalulekile (250-400 ml ngamunye): I-Alveein, i-Alvezin, i-Aminosol,
Izisombululo ze-Electrolyte: Isixazululo se-potassium chloride eyi-10% (10 ml) nesixazululo se-10% se-calcium gluconate (10 ml).
3. Ukudla i-pancreatitis
Ukwelashwa kwe-pancreatitis ebabayo futhi engamahlalakhona akunakwenzeka ngaphandle kokudla. Ngaphezu kwalokho, uhlobo lwesifo olungamahlalakhona sidinga umuntu alandele indlela adla ngayo impilo yonke.
Ngokuvamile, ekwelapheni i-pancreatitis, kunokudla okukhethekile okwelapha okwenziwe ngabakwaM.S. I-Pevzner - inombolo yokudla 5p (ithebula le-5p).
Kwi-pancreatitis eyingozi, ezinsukwini zokuqala ezingama-2-3 kuyadingeka ukwenqaba ngokuphelele ukudla, kuphuzwa kakhulu kuphela - amanzi amaminerali, umhluzi we-rosehip noma, ezimweni ezimbi kakhulu, amanzi angenalutho.
Umphumela onenzuzo emzimbeni ngesikhathi sokugula nokuphuza amanzi amaminerali - "Narzan", "Yesentuki" (No. 4 no 17).
Yini engingayidla nge-pancreatitis?
Imenyu ye-pancreatitis kufanele ibe namaprotheni amaningi namavithamini ngangokunokwenzeka, namafutha amancane nama-carbohydrate ngangokunokwenzeka.
Kwimikhiqizo ene-pancreatitis ongayidla ingahlukaniswa:
Izifundo zokuqala: Isobho lemifino elisuselwa ku okusanhlamvu, imifino kanye nenyama engenamafutha kungenziwa ngobisi.
Izitsha eziphambili: inyama enamafutha aphansi (inyama yenkomo, inkukhu) nenhlanzi, i-omelet emaqanda enkukhu.
Imikhiqizo yokusanhlamvu: okusanhlamvu (irayisi, i-oatmeal, i-semolina, i-buckwheat ne-pearl ibhali), i-pasta, ama-crackers, isinkwa izolo, uwoyela wemifino (limited).
Imikhiqizo yobisi: imikhiqizo yobisi entsha emuncu ebilisiwe (ushizi we-cottage shizi, i-kefir, iyogathi), ushizi (onosawoti omncane, hhayi onamafutha hhayi omnandi), ubisi olungafakwanga (olunqunyelwe), ibhotela.
Imifino nezithelo: amazambane, beet, izaqathe, ithanga, squash, squash, izinhlobo ezingekho acidic apula.
Iziphuzo: imifino nezithelo, i-compote yezithelo eyomile, umhluzi we-rosehip, itiye ngobisi, i-brine (elinganiselwe).
Isobho:uju, ujamu noshokholethi (okukhawulelwe), ushukela omnandi wejerry, ushukela.
Indlela yokupheka: zonke izitsha kufanele zinqunywe, bese upheka, ubhake noma ubambe.
Ukudla kufanele kube okucucuzayo, ngokwezingxenyana ezincane, izikhathi ezi-5-6 ngosuku.
Kufanele futhi uzame ukungazihlanganisi izinhlobo ezahlukene zamaprotheni, amafutha nama-carbohydrate ekudleni okukodwa.
Izitsha zingadliwa kuphela kwifomu elifudumele (hhayi ngaphezulu kuka-60 ° C), izitsha ezishisayo nezibandayo kufanele zingafakwa.
Inani lamandla okudla - 2480 (for pancreatitis acute), ama-2690 (for chronic) kilocalories ngosuku.
Yini engadliwa nge-pancreatitis?
Nge-pancreatitis, awukwazi ukudla okunamafutha, okuthosiwe, okunoshukela, okunosawoti, okubhemayo, ukudla okusheshayo, ukudla okuqukethe i-fiber coarse nokunye ukudla okukhuphula imfihlo yejusi noma igesi. Ukusetshenziswa kotshwala, kufaka phakathi iziphuzo ezisezingeni eliphansi, kwenqatshelwe ngokuphelele.
Ukudla ongakwazi ukukudla kungahlukaniswa - i-kebab, amakhowe, ushokoledi, ukhilimu onamafutha, i-muffin, ingulube, isinqe, iwundlu, ihansi, idada, amanoni ezilwane, amaqanda aphelele, ukhilimu omuncu, ukhukhamba, umvinjana, u-anyanisi, u-anyanisi, isipinashi, isipinashi, isiga, imidumba, u-uviniga, imajarini, cocoa, ikofi, isinamoni, amagilebhisi nojusi wamagilebhisi, izinsuku, amakhiwane, ubhanana, u-ayisikhilimu.
Kuyalule futhi ukuthi ungafaki ukusetshenziswa kobisi. Ubisi lungangezwa okusanhlamvu, kepha izitsha ezinjalo zidinga ukuncishiswa ekudleni kwakho.
4. Ukwelashwa kokuhlinzwa kwe-pancreatitis
Ukwelashwa kokuhlinzwa kwe-pancreatitis, i.e. ngokuhlinzwa, imvamisa isetshenziswa ngendlela enzima noma esithuthukile salesi sifo. Imvamisa, lo msebenzi wenziwa kusetshenziswa i-laparoscopy, lapho kufakwa khona imishi.
Ngemuva kokuhlinzwa, isiguli sinqunywe i-antibiotic therapy nezinye izidakamizwa okuhloswe ngazo ukumisa izinqubo zokuvuvukala kumanyikwe.
Ngokwengeziwe, ukwelashwa okuphuma emzimbeni kanye nokuphathwa kwamalungiselelo we-enzyme kungabekwa.
5. Ukwelashwa kweSanatorium pancreatitis
Kuyasiza kakhulu i-pancreatitis engamahlalakhona, okungenani izikhathi ezi-1-2 ngonyaka ukuvakashela izindawo zokungcebeleka ezikhethekile kanye nama-sanatorium agxile ekwelashweni kwezifo zamapheshana emathunjini.
Olunye uhlobo lokwelashwa kuma-sanatoriums ukwelashwa ngamanzi amaminerali, ngaphandle kwegesi.
Ama-sanatoria adumile ezifo zamapheshana emathunjini (GIT) yiZheleznovodsk, Kislovodsk, Morshin, Pyatigorsk, Truskavets.
Eminye amakhambi abantu i-pancreatitis
I-tincture ye-anyanisi, amantongomane ne-cuffs. Leli thuluzi lisiza ukuguqula ama-pancreas kanye nokukhiqizwa kwe-insulin. Ukuze upheke, okokuqala kufanele wenze izinhlobo ezintathu ze-tincture: faka iziqukathi ezintathu ezihlukile, ngokwahlukana - 100 g we-anyanisi, 100 g wamaqabunga oqoshiwe we-walnut kanye no-60 g wotshani be-cuff. Thela ama-600 ml we-vodka kwisitshalo ngasinye. Shiya wonke ama-infusions amathathu endaweni emnyama izinsuku ezingama-7, ukuze ugcizelele. Ngemuva kwalokho, hlanganisa ama-tinctures ama-3 bese wenza i-tincture eyodwa kule ngxenye elandelayo - i-150 ml ye-anyanisi, i-60 ml ye-lin ne-40 ml ye-cuff. Ukumnika okulungiselelwe kufanele kuthathwe izikhathi 2 ngosuku, 1 tbsp. ukhezo, imizuzu engama-20 ngaphambi kokudla kwasekuseni nakusihlwa, ngaphambi kokulala.
I-Kvass ku-celandine ngokusho kweBolotov. Faka amalitha angama-2,7 e-Whey (noma amanzi ahlanziwe) embizeni engu-3-litre, isipuni 1 sikakhilimu omuncu (hhayi ngaphezu kwamafutha ayi-15%), 1 inkomishi kashukela, bese wehlisa amakhambi afakwe esikhwameni se-gauze (izingqimba ezi-4 ze-gauze) ezansi embizeni. i-celandine enamathisela okuthile ukuze ingakhuphuki emabhange. Izitini ze-Throat nazo zibopha nge-gauze. Imbiza ene-kvass yesikhathi esizayo kufanele ibekwe endaweni emnyama, efudumele yezinsuku eziyi-14, isikhunta sansuku zonke kufanele siqoqwe kusuka ebusweni baso, sixube. Ngosuku lwe-5, udeveli kufanele luvele phansi komsele. Sihlanganisa kusuka kulokhu kungafinyelela ezingeni lokudilika, ungqimba olungaphezulu lwe-kvass kolunye uhlangothi, futhi ngalo, sidlulise isikhwama nge-celandine esitsheni esisha, engeza amanzi kuthangi olusha kuya kwangaphambilini. Silahla udoti kusuka kumgqomo owedlule. Ngosuku lwe-11, uketshezi kufanele luqale amagwebu, lokhu inqubo evamile. Ngosuku lwe-15, ilitha eyi-1 kvass ithululelwa emgqonyeni bese ibekwa endaweni epholile ongayisebenzisa, bese kuthi i-Whey noma amanzi iphinde ifakwe embizeni enamalitha amathathu kwinqanaba elandulele. Ngemuva kwezinsuku eziyi-15, i-kvass ingahlanjululwa ngokungeza amanzi amasha, amahlandla ama-4 kuphela, emva kwalokho iphinde ilungiswe.
Thatha i-kvass ephekiwe nge-pancreatitis, udinga i-1 tbsp. ukhezo imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla, izikhathi ezi-3 ngosuku. Uma, kungakapheli izinsuku eziyi-7, ayikho imiphumela emibi etholakele (isicanucanu, ukungezwani komzimba), umthamo owodwa ukhuphuka ufike ku-100 ml futhi uqhubeke nokudakwa amasonto ayi-7 alandelayo. Inkambo ejwayelekile yokwelashwa izinyanga ezimbili.
Ijusi kusuka iklabishi, izaqathe kanye ulethisi. Iklabishi nge-pancreatitis, noma kunalokho, ujusi wayo, ikakhulukazi ohambisana nejusi le-karoti nejusi kusuka emaqabunga e-lettuce, angasetshenziswa hhayi kuphela ekwelapheni i-pancreatitis ekhaya, kodwa futhi nesifo sikashukela nokubuyiselwa kwemisebenzi ejwayelekile ye-pancreatic.
Ukulungiselela ijusi yemithi ye-pancreatitis, udinga ukudlula amanani alinganayo amahlumela weBrussels, izaqathe kanye ne-lettuce nge-juicer. Ijusi elisha elilungiselelwe kufanele lidakwe ekuseni, imizuzu engama-20 ngaphambi kokudla. Kulokhu, kuyadingeka ukulandela ukudla okune-carb ephansi futhi uhlanze amathumbu ngezikhathi ezithile. Inkambo yokwelashwa iyinyanga eyi-1, emva kwalokho kwenziwa ikhefu lamasonto amabili bese kuphuzwa isiphuzo sanyanga nenyanga.
Ifilakisi. Kusihlwa, faka i-thermos ye-3 tbsp. wezipuni ze-flaxseeds bese uzigcwalisa nge-1 litre lamanzi abilayo, vala bese ubeka ubusuku bokugcizelela. Ekuseni, nyakazisa okuqukethwe kwe-thermos, uyihlume futhi uthathe i-100 ml izikhathi ezi-3 ngosuku, imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla. Inkambo yokwelashwa izinyanga ezimbili.
Oats I-Oat kissel isetshenziswa ekwelapheni kwazo cishe zonke izifo ze-emathunjini emathunjini. Ngaphezu kwalokho, ama-oats afaka inani elikhulu kakhulu lamavithamini nama-micronutrients ama-microutrients anikela ekubuyiselweni kwezitho zokugaya ukudla ngemuva kwezifo.
Ukuze wenze ijeli ngokuya ngeresiphi ye-Izotov, udinga ukuthulula amanzi ayi-3.5 l amanzi abilisiwe ahlanzekile embizeni engu-5 l. Okulandelayo, linda kuze kube yilapho amanzi esehlangene afinyelela ku-30-40 ° C bese uthele ama-500 g we-oatmeal kuwo, engeza ne-100 ml ye-kefir. Hlanganisa konke kahle, vala ngesembozo esiqinile bese ubekela izinsuku ezimbili zokuvutshelwa endaweni efudumele emnyama, ngaphezu kwalokho usonga isitsha. Ngosuku lwe-2, ama-bubble kufanele avele ebhange. Ngosuku lwe-3, fafaza okuqukethwe embizeni epanini le-5 litre, bese uthela i-oatmeal evuvukile embizeni yengilazi engu-3. Faka u-2/3 wamanzi abilisiwe kokuqukethwe kwembiza yokusanhlamvu, unikine amachashazi kahle bese uwahluza futhi epanini lika-5 litre. Manje geza kahle imbiza eyi-5 litre lapho umkhiqizo wethu uzulazula khona kuqala, bese uthele okuqukethwe yipaneli kuwo - umkhiqizo okhubazekile. Vala imbiza bese uyibuyisela endaweni emnyama, efudumele, kepha kulokhu cishe amahora ayi-18. Ngemuva kwalesi sikhathi, umkhiqizo wethu uzohlukanisa - kuzoba nesendlalelo esimhlophe sediment kusuka ngaphansi, nesendlalelo esobala ngaphezulu. Cima uketshezi olucacile, futhi lungasetshenziswa njenge-kvass. Thela ungqimba omhlophe nodaka ungene ezimbizeni bese uligcina esiqandisini, kepha hhayi ngaphezulu kwezinsuku ezingama-21, sizowusebenzisa lapho ulungiselela i-oat jelly.
I-Kissel ene-pancreatitis kusuka ku-oatmeal ilungiswa kanjena: engeza i-5-10 tbsp. wezipuni of ezimhlophe bagxila epanini elincane ongenamthungo bese ubathululela izinkomishi ezimbili zamanzi abandayo. Pheka i-jelly emlilweni ophansi, uvusa njalo, ekuvumelaneni okukufanele. Okulandelayo, susa i-jelly esitofu, uyiyeke iphole, ukuze uthuthukise ukunambitheka, ungangeza usawoti omncane, uwoyela kuyo futhi ungayiphuza ngesinkwa. Ungasebenzisa futhi ukugxila okumhlophe kwe-oatmeal ukulungiselela izitsha ezahlukahlukene, ngokwesibonelo, amazambane abunjiwe, azongeza izakhiwo eziwusizo ekudleni kwakho.
I-Dandelion. I-50 g yezimpande ze-dandelion echotshoziwe ithululela ama-300 ml wamanzi abilayo, amboze umkhiqizo bese ushiya amahora ama-2 ukugcizelela futhi upholile. Cindezela ukumnika bese uthatha u-100 ml ngaphambi kokudla, amahlandla ama-3 ngosuku.
Ukuvunwa kwamakhambi 1. Hlanganisa ngezilinganiso ezilinganayo izitshalo ezilandelayo - i-calendula, i-stigmas yommbila, i-peppermint, i-chamomile yensimu, futhi uma i-acidity yehlisiwe - ukhula. Izipuni ezi-4 zaleli qoqo lithululela ama-800 ml wamanzi abilayo, bese ubeka umkhiqizo kubhavu wamanzi, imizuzu engu-15 bese ubeka eceleni ithuluzi lokupholisa nelokungenisa, imizuzu engama-50. Okulandelayo, hlunga ukufakwa bese uthatha ¼ inkomishi ehlanjululwe ku-¾ izinkomishi zamanzi afudumele, Izikhathi ezi-3 ngosuku, imizuzu eyi-15 ngaphambi kokudla. Gcina ukumnika esiqandisini, kepha kungabi ngaphezu kwezinsuku ezi-5.
Ukuvunwa kwamakhambi 2. Hlanganisa izitshalo ezilandelayo ngezilinganiso ezilinganayo - i-wort yeSt John, i-mamawort ne-peppermint. 2 tbsp. wezipuni uthele 500 ml wamanzi abilayo bese ushiya imizuzu engama-45 ukugcizelela futhi upholile. Cindezela futhi uthathe inkomishi engu-before ngaphambi kokudla, amahlandla ama-3 ngosuku.
Ukuvimbela i-pancreatitis kufaka ukuhambisana nezincomo ezilandelayo:
- Nikeza utshwala nokubhema ngokuphelele!
- Uma kunezimpawu ze-pancreatitis eyingozi, bonana nodokotela, ungalushiyi lolu daba ngokuzayo, ukuze isifo, uma sikhona, singalapheki,
- Ungazishiyi izifo ezahlukahlukene, ikakhulukazi izitho zokugaya ukudla, ukuze ube nethuba, ukuze zingalapheki futhi zibe ngumngane wempilo yakho njalo,
- Uyayidlala imidlalo? Okuhle kakhulu, nokho, ungayisebenzisi ngokweqile, njengoba ukuzikhandla ngokweqile komzimba kufaka isandla ekwandiseni i-pancreatitis,
- Uma isihlabathi sitholakala emgodini webhiliary, sisuse emzimbeni ukuze singafiki ekwakhekeni kwamatshe emzimbeni,
- Yidla ngendlela efanele, ngokwezingxenyana, ezingxenyeni ezincane, uvikele ukuhlanganiswa kwamaprotheni nama-carbohydrate esidlweni esisodwa,
- Zama ekudleni kwakho ukugxila ekudleni okucetshiswe ngamavithamini nangamaminerali, futhi kungcono ukwenqaba ukudla okungasebenziseki futhi okulimazayo, noma okungenani ukhawule inani labo,
- Zinciphise ekudleni okunamafutha, okuthosiwe, okunezipayisi, okunosawoti, kokudla okubhemayo nokunosawoti, futhi okungcono kakhulu, kunikeze. Kungcono ukupheka izitsha, ukupheka noma ukubhaka.
- Zinciphise ekusetshenzisweni kwekofi - akukho ngaphezulu kwekofi eyodwa yekhofi ngosuku, futhi kungokwemvelo kuphela.
Ukubona izincomo ezingenhla zabezempilo, ama-pancreas akho nezinye izitho zokugaya ukudla, futhi impela wonke umzimba, uzokutshela - ngiyabonga!
Ushukela Wegazi 6
Kungani i-aspartame iyingozi futhi ilimaza ukusetshenziswa kwama-sweeteners?
Yini ijika leshukela futhi yini enganqunywa kulo?
Ngingakwazi ukudla ama-apricots omisiwe onesifo sikashukela
Kwehliswe ukungatheleleki kwesifo sikashukela
I-Fragrant Callisia (Amadevu wegolide): ukulima nokusetshenziswa
Umuntu onesifo sikashukela unelungelo lokwenza lokho akuthandayo! Ukuxoxisana nelungu le-DiaChallenge Ilungu Lesifo Sikashukela
"Uma ufuna ukuphila, kwenze!" Ukuxoxisana nomuntu obambe iqhaza kuphrojekthi ye-DiaChallenge ngempilo yabantu abanesifo sikashukela NgoSepthemba 14, i-YouTube izokwengeza iphrojekthi engafani nenye - iqiniso lokuqala libonisa ukuhlanganisa abantu abanesifo sikashukela sohlobo 1. ...
Amavithamini kanye namaminerali adingekayo ezigulini ezinesifo sikashukela
Yini okufanele uyikhethe: Flemoxin Solutab noma Amoxicillin?
Izici zokusetshenziswa kwamakhasethi wokuhlola we-glucose metres Akkuchek mobile
Ukudla ngesifo sikashukelaIzizathuUkunakekelwaIsifo sikashukela ezinganeni nasentsheniIsifo sikashukelaIsifo sikashukela kubantu besifazaneIsifo Sikashukela NemidlaloUkwelashwa okuhlukileUkuxilongaIsifo sikashukela
I-pancreatitis oatmeal jelly - iresiphi ye-Izotov neMamotov
Imithi Yesifo Sikashukela yamahhala
I-Fluvastatin: imiyalo yokusebenzisa, izixwayiso kanye nokubuyekezwa
Ukulungela isifo sikashukela: indlela yokuqeda, ukwelashwa ngezidakamizwa namakhambi abantu
Ukudla ngezimpawu zesimo se-prediabetesic state